Gbasara Anyị | SUNSUM ụlọ CO., LTD
Igwe anaghị agba nchara karama
Egwuregwu PE egwuregwu
Glass & Silicone kalama
Igwe anaghị agba nchara Tumbler
Ihe eji ebu nri
Sunsum ezinụlọ Co., Ltd.emi odude ke Ningbo City, Zhejiang Province, nke bụ ihe dị mkpa ọdụ ụgbọ mmiri obodo na ndịda ọwụwa anyanwụ nke ụsọ oké osimiri nke China. Omenala ahia ahia nke mba ozo na uru nke ịbịaru nso n'ọdụ ụgbọ mmiri dị omimi emeela Ningbo obodo ahia mba ọzọ dị ike ma mepụta ụlọ ọrụ ndị ahịa mba dị ka ụlọ ọrụ anyị.
Anyị ụlọ ọrụ a na-pụrụ iche iche iche ahịa plastic 、 metal na silicone ezinụlọ ngwaahịa na nkwado onyinye na mba ahịa ihe karịrị afọ 10. Ngwaahịa anyị gụnyere ụlọ ụlọ & usoro ị drinkingụ ihe ọ drinkingụ drinkingụ.
Anyị ekwenye factory na-audited site Disney, NBCU, AVON, Sedex, BSCI. Site na nyocha ndị dị otú ahụ ruru eru, anyị kwadoro ọtụtụ ụdị ikike, dị ka Disney, Minions, Mattel, DC, Marvel, Paw Patrol. Bugharịa ọtụtụ ibu na nnukwu ụlọ ahịa dị ka Tesco, Coles.
Anyị nwere ọkachamara QC otu, usoro nyocha siri ike, ma nwee njikọ chiri anya na ụlọ ọrụ nyocha ọkachamara na ụlọ ọrụ nyocha iji nye ndị ahịa ngwaahịa dị elu.
Anyị nwere ikike OEM & ODM siri ike, ngwụcha elu, mbipụta akwụkwọ na nkwakọ ngwaahịa nwere ike ịhazi. Enwere ike hazie ebu ahụ dịka ihe atụ na eserese nke ndị ahịa nyere.
Anyị nwere ihe karịrị afọ 10 nke ụlọ ọrụ ahụmahụ na ike ọkọnọ yinye mwekota ike, nwere ike ngwa ngwa meghachi omume na chọrọ na-enye elu-edu ọrụ.
Anyị ji onwe anyị na ọtụtụ ngwaahịa dị iche iche na ọnụahịa asọmpi yana ezigbo mma, azịza ọsọ ọsọ, oge nnyefe ọsọ ọsọ na ezi ọrụ. Na-arụ ọrụ na anyị, ị ga-eche na pụrụ iche na elu ọrụ nke anyị na-arụ ọrụ otu. Anyị na-etinye aka na-eme ka azụmahịa gị mfe ka uru kacha.
50lọ 503, Shengyue Building, No.227 Tongji Road, Jiangbei District, Ningbo City, China.